होन्डाको एउटै कारमा १७ लाख सम्मको छुट !::Hamrodamak.com
होन्डाको एउटै कारमा १७ लाख सम्मको छुट !
काठमाडौं । नेपालका लागि होन्डाको आधिकारीक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङले ‘द ड्रिम डिल’ नामक नयाँ योजना सर्बंजनिक गरेको छ। कम्पनीले ग्राहक केन्द्रित गर्न यस्तो योजना ल्याएको हो। कम्पनीले होन्डाको एसयूभी सीआरभीमा १७ लाख छुटको अफर गरेको छ । यो छुट भने सन् २०१६ मोडलका गाडीहरुमा मात्र लागु हुने स्याकरले जनाएको छ ।
२.० लिटर इन्जिन रहेको २०१६ सीआरभीको मूल्य १ करोड ७ लाख ७५ हजार रहेकोमा यस योजना अन्तर्गत खरिद गर्दा १७ लाखको छुटसहित मूल्य ९० लाख ७५ हजार पर्न जानेछ । होन्डा सीआरभीको २०१८ मोडलको भने १ करोड ३३ लाख रहेको छ ।
त्यस्तै स्याकारले हालको बजार मुल्य ६७ लाख रहेको २०१५ को होन्डा सिभीकमा ४ लाख ५० हजार छुट दिएको छ । २०१८ मोडलको भने ७५ लाख रुपैयाँ पर्ने छ । होन्डाकै २०१६ मोडलको सिटीमा पनि ८ लाख २५ हजार छुट दिएकोे छ । मोविलो पनि २०१६ को मोडल हो जसको मूल्य ४७ लाख रहेकोमा अफर योजना अन्तर्गत किन्दा ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँमा पाइनेछ ।कम्पनीले होन्डाका सबै गाडीहरुमा ३० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गरेपछि ११.५ प्रतिशत व्याजमा फाइनान्स सुविधा समेत रहेको जनाएको छ ।